トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul nesigaba sesine esiteji "umgijimi Chaser (isikhathi buthule, yokujama tsi isikhathi)" futhi
Ngokusebenzisa indlela yangempela
twin Seoul uthole [3500 yen Mahhala asihlole] ukuze izangoma kuyinto eziyisikhombisa esiteji, ngempela isinyathelo kuze kube tho komunye umphefumulo, esigabeni sesine inkathi ubuhlungu ngempela kungase babe. Kulesi sigaba, ngoba ezimbili ngokuhlukana siyeza.
kakhulu ukushayisana e esigabeni sesithathu, ngemva ubuhlungu esijulile komunye nomunye, umuntu ukuthi kwakuba impumuzo kanjani hhayi ukumelana ubuhlungu, nokudideka omunye ngokuzumayo kude kwenye inhlangano, + ngakho ukuxosha isitha I.
lokhu ibanga, ungenalo ekuhlehleni inqobo nje uma maningalahli ukuzazisa ezibangele yokungezwani lesibili kuya esigabeni sesithathu. Ngezinye izikhathi, futhi ukuthi uzoqhubeka nokupheka ukwehlukana isimo esikhathini sasivumela eside.
Kodwa injongo yangempela zalesi sigaba akuyona lokhozi sinamathele omunye ephathini ukuthi wahamba kanye, mina, ukuthi ukuhleleka okunjalo kuvele aim Awakening ezingokomoya ukuthuthukisa bebodwa. Kungakhathaliseki Kizukeru ukwenza lokho, uyoba ukuhlolwa ezinkulu esigabeni sesine.
ego kanye imiqondo uma nokujaha ngaphezulu kude ukuya Twin Seoul nobuhlobo babo
? umgijimi Chaser
oye zanqwabelana ukuphila nothando nakho we Chase esidlule, kwakha eziningi injabulo. Khona-ke, imizwelo yenziwa nangokwengqondo ukuba esimweni engazinzile kakhulu, kodwa hhayi ukuze lalizoliyeka kakhulu abaphikisi.
Ngenxa yalokho, nomunye hit izinkathazo nokungabaza komunye nomunye, futhi ngizizwa ubuhlungu eqinile ophikisana naye. Uma ungasafuni ukuba akhuthazele kuze lokhu, umuntu ukuzama ukubalekela ubuhlobo. Futhi, kanye nomunye ukuthi nabaphunyukayo phambi ngokuzumayo amehlo, jaha ngabomvu uzama uphinde uthole ngandlela-thile abaphikisi. Kulesi ubuhlobo, ngubani ongcono ukubaleka umgijimi, jaha izobizwa ngokuthi Chaser.
? ukuhlupheka ubalekele
umgijimi kuyoholela Awakening ezingokomoya Chaser Kwakuyoba zidideke ngaphandle kokwazi ukuthi kwenzekani. Futhi, umgijimi ukuvaleka ngicabanga ukuthi makazidele, kulula noma uzisole bebodwa Dari igqubu abaphikisi. Isimo kuba buhlungu kakhulu, kungase kube labo babulawa.
Nokho, uma ngempela amabili abantu ungumphefumulo ayiwele naye, umgijimi akanayo kuka wabaleka ngenxa ngaba Chaser into inzondo. Nakuba Ngiyakuthanda kakhulu, bazizwa ukwesaba ukuba ngizihlole ukuthi akazi lo Chaser, ingabe uke abaleke. Njengoba ubuhlobo into ezingeni umphefumulo, awuyona into ethile ekwazi kucatshangwe ukuthi uzama ukuthuthukisa.
Ngakho, Chaser, kufanele ulahle kanye kukhathazeka we umgijimi. Futhi, uma senyusa ukuze bathuthukise bebodwa, siyakwazi ukwamukela Awakening ezingokomoya.
esigabeni sesine lapho uvuka nomunye enkathini, futhi uligqolozele ngokwami ??ngokuyeka is nomunye, yini engashiwo yayiyoba inkathi ngempela ukwandisa bebodwa ukuze bakwazi uzithanda wena. Uma Norikoere kwalesi siyaluyalu, kungenzeka ukuthola Awakening ezingokomoya komunye nomunye, futhi kufika kuze kube khona mina ekugcineni bakwazi uqhubekele esigabeni esilandelayo umphefumulo abangamawele.
Uma thina, sikwazi ukwamukela Awakening ezingokomoya.